သူမရဲ့မလှတဲ့နှာခေါင်းလေးကို နှာတံမြင့်မြင့်လေးဖြစ်အောင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး အရမ်းလှသွားလို့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဖြိုးမေစံ – Online News Post
သူမရဲ့မလှတဲ့နှာခေါင်းလေးကို နှာတံမြင့်မြင့်လေးဖြစ်အောင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး အရမ်းလှသွားလို့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဖြိုးမေစံ
By Cele PTPosted on May 18, 2022
ပရိသတ် ကြီးရေ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်း အရ အစီအစဉ် တင်ဆက် သူတွေဟာ ဆိုရင်လည်း ပြာ်သူ့ အချစ်တော် မင်းသားမင်းသမီးတွေလိုပဲ ဝန်းရံအားပေး ချစ်ခင်တဲ့သူတွေ ရှိနေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူတွေ ထဲမှာ ခေတ်​သစ်ပျိုမေ အစီအစဉ် ပြသစဉ် ကတည်းက ပရိသတ်တွေ အားပေး ဝန်းရံ ချစ်ခင်ကြတဲ့ ဖြိုးမေကို ပရိသတ်တွေ သိကြမယ် ထင်ပါတယ် နော်..။
ဖြိုးမေကတော့ အခုနောက်ပိုင်း အစီအစဉ်တင်ဆက် တာတွေ အပြင် Forever Group ကတင်ဆက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေထဲမှာလည်း ပါဝင် ရိုက်ကူး လာတာ ပါ..။ဒါ့အပြင် လက်ရှိ MRTV4 မှာ ပြသလျက် ရှိတဲ့ သရဖူ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာလည်း နီလာဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ပါဝင် ထားတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။လတ်တလောမှာတော့ ဖြိုးမေ တစ်ယောက် Surgery တစ်ခု ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း ပြောပြ လာခဲ့တာပါ..။ပြုပြင်ခဲ့တာ ကတော့ သူမရဲ့ နှာခေါင်းကို ခွဲစိတ် ပြုပြင်ခဲ့ကာ”အဓိက ကတော့ သူများတွေ မလှဘူး ပြောလို့ ၊ဝေဖန်လို့ ပြင်တယ် ဆိုတာထက် ..ကိုယ်ကိုယ် တိုင်က လုပ်ချင်လို့ ..
အမြဲ insecurity တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိခဲ့တဲ့ အရာလေးကို ပြုပြင် လိုက်ရတဲ့ အတွက် ကျေနပ် ပါတယ် ..အခုတော့ မိတ်ကပ် ပြင်ရင် အသည်း အသန် bronzer မသုံး ရတာရယ် ..ထိပ်က တော်တော်လေး လုံးနေတာရယ် ..မရှိတော့ တာမို့ တအားကို စိတ်ချမ်းသာ နေပါဘီ ..အရင်က နှာခေါင်းလုံးလုံး လေးနဲ့ ဖြိုးမေကို ချစ်ပေး ကြသလို ..နှာတံ မြင့်မြင့်နဲ့ ဖြိုးမေ ကိုလည်း ချစ်ပေး ကြပါဦးနော် …. ဘယ်လောက် ပဲ အသေးစား ခွဲစိတ်မှုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ..အရေးကြီးတာက စိတ်ချ ရတဲ့ Surgery Centre ကို ရွေးချယ် ဖို့ပါဘဲ …ပြီးတော့ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် ကို သေချာလိုက်နာ ဖို့လည်း လိုအပ်ပါ တယ် …!!!“ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ ပြောပြ ခဲ့တာပါ..။ပရိသတ် တွေ လည်း ပြောင်းလဲ သွားတဲ့ ဖြိုးမေ ရဲ့ ပုံစံလေးကိူ ကြည့်ပြီး ပိုလှလာလား ဆိုတာ မှတ်ချက် ပေးခဲ့ပါဦး နော်…။
ပရိသတ္ ႀကီးေရ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အရ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ သူေတြဟာ ဆိုရင္လည္း ျပာ္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္ မင္းသားမင္းသမီးေတြလိုပဲ ဝန္းရံအားေပး ခ်စ္ခင္တဲ့သူေတြ ရွိေနၾကၿပီပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူေတြ ထဲမွာ ေခတ္​သစ္ပ်ိဳေမ အစီအစဥ္ ျပသစဥ္ ကတည္းက ပရိသတ္ေတြ အားေပး ဝန္းရံ ခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ ၿဖိဳးေမကို ပရိသတ္ေတြ သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ ေနာ္..။
ၿဖိဳးေမကေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္တင္ဆက္ တာေတြ အျပင္ Forever Group ကတင္ဆက္တဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြထဲမွာလည္း ပါဝင္ ရိုက္ကူး လာတာ ပါ..။ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ MRTV4 မွာ ျပသလ်က္ ရွိတဲ့ သရဖူ ဇာတ္လမ္းတြဲ မွာလည္း နီလာဆိုတဲ့ ဇာတ္ေကာင္နဲ႔ပါဝင္ ထားတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။လတ္တေလာမွာေတာ့ ၿဖိဳးေမ တစ္ေယာက္ Surgery တစ္ခု ျပဳလုပ္ျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာၿပ လာခဲ့တာပါ..။ျပဳျပင္ခဲ့တာ ကေတာ့ သူမရဲ့ ႏွာေခါင္းကို ခြဲစိတ္ ျပဳျပင္ခဲ့ကာ”အဓိက ကေတာ့ သူမ်ားေတြ မလွဘူး ေျပာလို႔ ၊ေဝဖန္လို႔ ျပင္တယ္ ဆိုတာထက္ ..ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္က လုပ္ခ်င္လို႔ ..
အျမဲ insecurity တစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိခဲ့တဲ့ အရာေလးကို ျပဳျပင္ လိုက္ရတဲ့ အတြက္ ေက်နပ္ ပါတယ္ ..အခုေတာ့ မိတ္ကပ္ ျပင္ရင္ အသည္း အသန္ bronzer မသုံး ရတာရယ္ ..ထိပ္က ေတာ္ေတာ္ေလး လုံးေနတာရယ္ ..မရွိေတာ့ တာမို႔ တအားကို စိတ္ခ်မ္းသာ ေနပါဘီ ..အရင္က ႏွာေခါင္းလုံးလုံး ေလးနဲ႔ ၿဖိဳးေမကို ခ်စ္ေပး ၾကသလို ..ႏွာတံ ျမင့္ျမင့္နဲ႔ ၿဖိဳးေမ ကိုလည္း ခ်စ္ေပး ၾကပါဦးေနာ္ …. ဘယ္ေလာက္ ပဲ အေသးစား ခြဲစိတ္မႈပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ..အေရးႀကီးတာက စိတ္ခ် ရတဲ့ Surgery Centre ကို ေရြးခ်ယ္ ဖို႔ပါဘဲ …ၿပီးေတာ့ ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ကို ေသခ်ာလိုက္နာ ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါ တယ္ …!!!“ဆိုတဲ့ စာေလးနဲ႔ ေျပာၿပ ခဲ့တာပါ..။ပရိသတ္ ေတြ လည္း ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့ ၿဖိဳးေမ ရဲ့ ပုံစံေလးကိူ ၾကည့္ၿပီး ပိုလွလာလား ဆိုတာ မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ပါဦး ေနာ္…။
Previous post တင်းကိတ်လှပလွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို ရင်ဖိုအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှား
Next post အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေနဲ့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ညို့ယူဖမ်းစားလိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်